नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : दु:ख नमान्नुहोला दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरु !
दु:ख नमान्नुहोला दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरु !
हामी नेपाली कती उदार छौं हगी ! आफ्नो देश का खेलाडी, कलाकार, राष्ट्रका अग्रणी गहनाहरुको मतलब छैन, बिदेशी भनेपछी हुरुक्क । गुन्यु चोली खोसिँदा, दौरा शुरवाल खोसिँदा, हिन्दू धर्म खोसिँदा, यत्रो बर्ष संबिधान नबन्दा चुपचाप सहेर बसेका हामी हरु फुटवलमा सधैं अरु देशका टिशर्ट लगाएर हाम्रो नेपाली पन मज्जैले देखायौं । कुनै कुनै बेला यि र यस्ता कुराले मलाई निकै घोच्दछ तपाईंलाई नि ??